Ikhowudi yeeNqobo zoBuchule kunye neZenzo ezilungileyo | NASSAT
Iimfundiso zoBugcisa Izenzo ezilungileyo zeNASSAT.
I-NASSAT Code of Ethics Ethics
Imigaqo yokuziphatha ekhokela zethu izenzo ibuye ifake umfanekiso wethu njengenkampani eqinile neyithembekileyo.
Le Code of Ethics idibanisa imiyalelo ekufuneka ibonwe kwizenzo zethu zobugcisa ukuze sifumane imilinganiselo ephakamileyo yokuziphatha kwimisebenzi yethu. Ibonisa ubume bethu beenkcubeko kunye nezibophelelo esicinga ngazo kwiimarike esisebenza kuyo.
Le Code of Ethics isebenza kubo bonke abalawuli be-NASSAT nabasebenzi.
I-NASSAT inokholo lokuba, ukudibanisa nokuphuhlisa, kufuneka iqale kwiinjongo zoshishino kunye nemigqaliselo emgangathweni yokuziphatha ekwabelwana ngabalawuli nabasebenzi.
Senza kwimarike yobuchwepheshe obutsha ngokugxila ekuphuhliseni okuqhubekayo, ubunkokheli benkohlakalo kunye nokwaneliseka kwabathengi. Phakathi kweenjongo zethu ezibalulekileyo kukugcina idumela lenkampani elomeleleyo kwaye elithembekileyo, siyazi kakuhle uxanduva lwethu lwezentlalo kunye nezoshishino, ezifuna ukufumana iziphumo ngokunyanisekileyo, ezifanelekileyo, ezomthetho nezokubala.
Izenzo zethu kufuneka zihlale ziphawulwe ngokusisigxina ngongqibelelo, ukuthembela nokunyaniseka, kunye nokuhlonipha nokuxabiswa kwabantu, kwimfihlo yabo, ngokwazo kunye nesithunzi. Siyakukwenqaba nayiphi na isimo sengqondo esikhokelwa ngumbandela ngokuphathelele imvelaphi, iqela lobuhlanga, unqulo, isigaba sentlalo, isondo, umbala, ubudala, ukungazi kakuhle kunye naluphi na uhlobo lokucwaswa.
Sikholwa ukubaluleka koxanduva lwezentlalo kunye nezoshishino, njengenkampani ezinikezele kuluntu apho isebenzayo, kwaye ukuba olu xanduva lusetyenziswe ngokupheleleyo xa senza igalelo kuluntu kuluntu.
Abalawuli kunye nabasebenzi kufuneka bazibophezele ekuqinisekiseni ixabiso kunye nomfanekiso wenkampani, gcina indawo ehambelana naloo mfanekiso kunye nezo zithethe kwaye zenze ngokukhusela iimfuno zabathengi kunye neNkampani. Ukukhangela ukuphuhliswa kweNkampani kufuneka kusekelwe kuloo migaqo, sinokuzithemba ukuba izenzo zethu zikhokelwa yimigangatho ephezulu yokuziphatha kunye nokuhlonipha ngokuthe tye.
Kukwa kubaSebenzi abaziintloko beNkampani, ekusebenziseni imisebenzi yabo:
ukukhuthaza nokuzibophelela ekuziphatheni ngokuziphatha kunye nokunyaniseka, kubandakanywa unyango olulungileyo kwimpikiswano yomdla wobudlelwane bomntu kunye nobugcisa, nokuba luyimpumelelo okanye lunokwenzeka;
ugweme ukungqubana komdla kwaye uxhumane neNkampani nayiphi na ubudlelwane okanye ukuthengiselana okungavelela ukuba kukho ukungqubana kwelo hlobo;
athathe onke amanyathelo afanelekileyo ukukhusela imfihlo ulwazi ngokungqongqo malunga nkampani kunye nabathengi, wafumana okanye eyenziwe kwimisebenzi yabo nokuthintela ukusetyenziswa ngokungekho mthethweni loo elubala lolwazi, ngaphandle kokuba kufuneka umthetho, umgaqo okanye inkqubo yomthetho okanye ummiselo;
ukuvelisa ngendlela epheleleyo, echanekileyo, echanekileyo, ngexesha elifanelekileyo kwaye eqondakalayo iingxelo kunye namaxwebhu athunyelwe kumaziko alawulayo, ababoneleli, abahambisa, abathengi, kunye nolunye uqhagamshelwano loluntu olwenziwa yiNkampani;
ikwazise ngokukhawuleza iKomidi yoPhicotho kwanoma yikuphi ukuphulwa kwale miyalelo;
ugweme nayiphi na inyathelo, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, inokwenza ubuqhetseba, ukunyanzelisa, ukuxhaphaza okanye ukunyenga abaphicothi-zincwadi abazimeleyo, ngenjongo yokuvelisa iingxelo zezimali ezilahlekisayo yiNkampani.
Ubungcali bezobugcisa nezomntu
Ukusebenzisa, ekusebenziseni imisebenzi yabo, isimo sengqondo esifanayo nokuba umntu othembekileyo kunye nentembeko uya kuqesha ngobudlelwane nabanye abantu kunye nokulawulwa kwamashishini abo.
Umthetho usoloko uvikela ukulungelelanisa i-Institution, ukugcina imfihlo malunga nezoshishino kunye nokusebenza kweNkampani, kunye nezoshishino kunye nolwazi lwabaxhasi.
Kubalulekile ukuba izimo zabo zengqondo kunye nokuziphatha zibonakalisa ingqibelelo yabo yobuqu kunye nezobugcisa kwaye abazibekeli ukhuseleko lwabo lwezezimali kunye noluntu okanye lweNkampani engozini.
Ukuphonononga ngenyameko imeko ezingabonakalisa ukungquzulwano phakathi kwezinto ezinomdla kunye neenkampani kunye / okanye ukuziphatha okungavumelekanga kwinqanaba lokujonga - nokuba ngaba bangabangeli ilahleko ezithile kwiziko.
Ngokukodwa, ezi ziphatha zilandelayo azivunywanga:
Gcinana ubudlelwane bezoshishino, ngokusemandleni akho njengommeli weZiko, kunye neenkampani apho wena, okanye abantu abavela kwintsapho okanye ubuhlobo bomntu, unomdla okanye uthatha inxaxheba - ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo - ngaphandle kokugunyazwa kobukhulu obuphezulu, kwizinga eliphantsi loMphathi .
Gcina ubudlelwane obuthile boshishino, uhlobo lwendalo, kunye nabathengi okanye ababoneleli. Nayiphi na ubudlelwane bezorhwebo nabathengi okanye ababoneleli abavumelekanga, kodwa kufuneka baxelelwe ngaphambili, ngokubhaliweyo, kumphathi wabo okanye umntu ophetheyo loLawulo lweeNgebe kunye neengozi.
Ukungeniswa kwishishini labo.
Sebenzisa isikhundla sakho, umsebenzi okanye ulwazi malunga nezoshishino kunye nemicimbi yeziko okanye abaxumi bayo, ukuchaphazela izigqibo ezinokuthandayo iimfuno zakho okanye zezithathu.
Yamkela okanye unikezele, ngokuthe ngqo okanye ngokungathandabuzekiyo, izipho okanye izipho zobuntu bomntu, ezibangelwa ubudlelwane kunye ne-NASSAT kwaye ezinokuchaphazela izigqibo, ukuqhuba ishishini okanye inzuzo yabasithathu. Izipho ezingakhange zifakwe kwimeko leyo, kodwa leyo idlula umlinganiselo wemiqathango echazwe kwiMigaqo ye-RP-29, kufuneka ibhalwe ngokubhaliweyo kumntu onoxanduva loLawulo lwangaphakathi kunye neengozi.
Nawuphi na isimo sengqondo esicacisayo kubantu esinokubambisana nabo, ngokusekelwe kumbala, ngesondo, inkolo, imvelaphi, iklasi yoluntu, ubudala okanye ukukhubazeka ngokomzimba.
Ukuhlawula izihlobo ngaphandle kokugunyazwa kweso sikhundla esiphambili, bonisa ukuqeshwa kweentsapho okanye omnye umntu abakhombise, ngaphandle kokumxelela umntu onoxanduva lokuqesha.
Sebenzisa izixhobo kunye nezinye izibonelelo zeZiko kwiinjongo zabucala ezingagunyazisiweyo.
Ukubandakanya kwimisebenzi yangasese engagunyaziswanga ephazamisa ixesha elichithwe lisebenza kwiNkampani.
Ukusetyenziswa kwiinjongo zabucala okanye ukudluliselwa kwamanye amaqela ubuchwepheshe, iindlela, ukwazi kunye nolunye ulwazi olukhoyo kwiziko, okanye oluye lwaphuhliswa okanye lwafumaneka ngalo.
Ubonakaliswe egameni le-NASSAT ngaphandle kokugunyazwa okanye ukufaneleka.
Imizekelo yokuziphatha ekulindelekileyo kwaye iyahambelana namaxabiso eNkampani kunye nokukhangela iziphumo kukuba:
Ukuvuma ngokunyanisekileyo iimpazamo ezenziwe kwaye ubenxibelelane ngokukhawuleza ekuphakameni kwakho.
Phendula izikhokelo ezichasene nemigaqo kunye nexabiso leNkampani.
Iingcebiso ezikhoyo kunye nokugxeka okwakhiwe ngenjongo yokuphucula umgangatho womsebenzi.
Ukuzinikela ngokwaneliseka kufuneka ziboniswe nokuhlonipha amalungelo abo kunye ukukhangela izisombululo ezihlangabezana iimfuno zabo, njalo ngokungqinelana neenjongo zophuhliso kunye inzuzo zeli ziko.
Ukubonelela ngeenkcukacha iinkonzo ezibonakaliswe ngokuzithoba kunye nokusebenza kakuhle, ukunika ulwazi olucacileyo, oluchanekileyo noluluncedo. Umxhasi kufuneka afumane iimpendulo, nokuba ngaba aphilileyo, kwiimfuno zabo, ngendlela efanelekileyo nangethuba elilindelekileyo.
Gwema ukunikezela unyango olukhethekileyo kunoma ubani umntu onomdla okanye umvakalelo.
Ubudlelwane kwiNdalo yoLuntu
Ubudlelwane kwimimandla yomsebenzi kufuneka lukhokelwe ngenceba kunye nentlonipho. Bambisana ukuze umoya weqela, ukunyaniseka, ukuzithemba, ukuziphatha okuhambelana namaxabiso eZiko kunye nokukhangela iziphumo kubaluleke kakhulu.
Xa uqhuba indima yokubongamela, khumbula ukuba abaqeshwa bakho baya kuthatha njengomzekelo. Izenzo zakho, ngoko, kufuneka zibe ngumzekelo wokuziphatha kweqela lakho.
Ukusetyenziswa kwesikhundla ukucela izibonelelo okanye iinkonzo zabasebenzi abaphantsi kwabo akuvumelekanga.
Kubalulekile ukuqaphela ukubaluleka komntu ngamnye kunye nokukhuthaza ukufikelela okulinganayo kumathuba ophuhliso ophuhliso okhoyo, ngokwemiqathango, iimpawu kunye neminikelo yegosa ngalinye. Akukho sigqibo esivunyelwe ukuba sichaphazele umsebenzi ophantsi kwabafundi abangaphantsi kobuhlobo babo kuphela.
Ubudlelwane kunye neCandelo likaRhulumente
Ukugcina imigangatho ephezulu yokunyaniseka nokuthembeka kubo bonke oonxibelelwano nabaphathi kunye nabasebenzi becandelo likarhulumente, bahlale bephepha ukuba ukuziphatha kwabo kubonakale kungafanelekanga. Yeka ukuvakalisa izimvo malunga nezenzo okanye izimo zengqesho zamagosa karhulumente, okanye ukubeka izimvo ngezopolitiko.
Xa uvikela imfuno yeziko, yenza ngokuzithemba kwimilinganiselo yokusebenza yeNkampani kwaye uhlale ugcina imigangatho ephezulu yokuziphatha kunye nenhlonipho ngemithetho nemimiselo esebenzayo.
Abathengisi ukukhetha yekontraka kufuneka kusoloko lusekelwa phezu, zobungcali, imigangatho zobugcisa zokuziphatha kunye neemfuno Company, kodwa iya kuqhutywa ngokusebenzisa iinkqubo kwangaphambili ezifana ukhuphiswano okanye ixabiso ikowuteshini, ukuze kuqinisekiswe eyona ndleko ilungileyo / inzuzo .
Gwema ukwenza ishishini kunye nababoneleli ngegama elibi.
Imilinganiselo efanayo yokuziphatha ifanele ifakwe kwiintsebenziswano kunye namanye amaziko anika iinkonzo okanye apho i-Institution ngumthengi.
Ubudlelwane kunye nabaHlomelo
Ukukhuphisana okufanelekileyo kufuneka kube yinto ebalulekileyo kuyo yonke imisebenzi yethu kunye nobudlelwane namanye amaqumrhu kunye namaziko emakethe entsha. Ukukhuphisana kwethu kufuneka kusetyenziswe ngokusekelwe kulo mgaqo.
Azikho izimvo ezifunekayo ezinokuthi zithinte umfanekiso wokhuphiswano okanye zenze igalelo lokusasazwa ngabo. Ukuphatha amanye amaziko emali ngenhlonipho efanayo iNkampani ilindele ukuphathwa ngayo.
Kuvumelekile ukubonelela ukhuphiswano ngolwazi oluvela kwiziko.
Ulawulo lweKhowudi yokuziphatha
Management Code of Yokuziphatha umsebenzi we Audit of NASSAT, nenoxanduva kunxibelelwano, ukuvuselela kunye nokuphunyezwa, ngokunjalo yokucebisa Ethics Committee kwizigqibo zayo.
IKomiti yezoLuleko kufuneka ihlolisise ngokusisigxina ukubaluleka kunye nokufaneleka kwalo Mgaqo, kwakunye nokuzimisela izenzo eziyimfuneko ekuhanjisweni nasekuhanjisweni kweendlela eziphezulu zokuziphatha ngokuziphatha kwiziko.
Kuyikhono leKomiti, ngaphezu koko, ukufumana isigwebo sezona ziphoso ezinzulu zokuphula umthetho we-Ethics and Ethics and deliberate on questions about the interpretation of text.
Ukubunjwa kweKomiti yezoLwimi kuchazwa kwiSetyhula yangaphakathi AG-17 - Imigangatho yokuziphatha iNASSAT.
Ukubhengezwa nokuthotyelwa kwemigaqo yokuziphatha kubhalwe kwiSetyhula yangaphakathi.